Kick-boxing – Lion Force: lasa nanao «professionnel» any Sina i Odilon | NewsMada
Kick-boxing – Lion Force: lasa nanao «professionnel» any Sina i Odilon
Manao ezaka, miditra amin’ny matihanina ny klioba Lion Force, eo amin’ny taranja kick-boxing. Nisy mantsy mpikatroka avy aminy, lasa nanao “combat pro” any Sina. Mbola mitohy kosa ny famolavolana ireo atleta hafa.
Sambany eo amin’ny tantaran’ny kick-boxing malagasy no nisy mpikatroka lasa matihanina ka nahazo fifanarahan’asa any ivelany, amin’ity haiady ity. Fantatra mantsy fa lasa any Sina, Rakotonirina Odilon, mpikatroka novolavolain’ny Lion Force, ka hanao “combat pro” fotsiny izy amin’izany, izay handraisany vola toa ireny, an’ny “professionnel”, any Etazonia ireny. Izay no nambaran’i Boto Gilbert, tomponandraikitra teknikan’ny Lion Force, nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety, ny asabotsy lasa teo, tetsy Mahamasina.
Ankoatra izay, nohararaotin-dRazafimiakatra Naina Herinandrasana, filohan’ny Lion Force, ny nankasitraka an-dRakotonirina Mahery, nandrombaka ny ho tompondaka eran-tany ka nahazoany ny “ceinture WKN Pro”, miampy ny “chevalier de la boxe” sy ny amboaran’ny ranomasimbe Indianina, lasan’i Vohariniaina Pierre, nakany ny “ceinture WKN Pro”, ihany koa. Nomena “gants” sy “proteges” ary lelavola, izy mirahalahy ireo.
Raha tsiahivina, fihaonana notanterahina tany Mayotte, ny 28 jolay lasa teo izany ady natrehin’izy mirahalahy, izany. Tamin’izany no naha voatendry ho “premier promoteur”azy, aty amin’ny faritra Afrika kosa, ny Lion Force, tamin’ny alalan’ny Me Jakoba Gilbert.
Fotoana nilazan’ny tomponandraikitry ny Lion Force, ihany koa fa feno 8 taona ny klioba, ankehitriny ary nanaovan’izy ireo, ny tombanezaka izay mahavelom-bolo, noho ny nahazoana vokatra tsy mitsaha-mitombo. Anisan’izany, ny ho tompondakan’i Afrika, lasan’i Menavolo sy ny medaly alimo azon’i Eric, nandritra ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany ary ireo ho tompondakan’i Madagasikara, maro.
Vinan’ny klioba Lion Force, ny hametrahana rafitra matihanina ka mba hahazo tamberina, amin’ny ady ataony ary ho azo iveloman’ny mpikatroka tsara ny kick-boxing.
Nambaran’ny Me Boto Gilbert fa hahemotra amin’ny volana desambra ny hetsika “combat pro”, saika hokarakarain’ny klioba Lion Force, ny 8 septambra ho avy izao. Fihaonana, hanasana ireo mpikatroka avy any Sina sy La Réunion ary i Frantsa.